သမီးလေး ငိုသံက ကျွန်မနှလုံးသား တခုလုံး ဆွဲဆုတ်ယူနေသလို ခံစားရသည်။ မမြင်ရက်သည့်အဆုံး တံခါးပိတ်ကာ ပြတင်းပေါက်ဆီသို့ လျှောက်ရင်း ကောင်းကင်မှာ သာနေသည့် လမင်းကြီးကို ငေးကြည့်မိသည်။ အေးမြသော လရောင်သည်၎င်း၊ တသွဲ့ သွဲ့ တိုက်ခတ်နေသော လေပြေလေညှင်းသည်၎င်း၊ မွှေးထုံနေသော ပန်းရနံ့ သည်၎င်း ကျွန်မရင်ကို ငြိမ်းအေးအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ခန့် က ကျွန်မလည်း သမီးလေးလို ငိုကြွေးခဲ့ဖူးသည်။
မေမေ့စာကို ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ကျွန်မ ငိုကြွေးမိသည်။ မေမေ၏ နှလုံးသွေးဖြင့် ရေးဖွဲ့ ထားသော ​ဤစာလေးသည် ကျွန်မ၏ တွေဝေမှုများ၊ မပြတ်သားမှုများကို တိကျပြတ်သားစေခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ငိုကြွေးစရာ မျက်ရည်များ မကျန်တော့လောက်အောင် ငိုကြွေးပြီးနောက် ကျွန်မ တည်ငြိမ်သွားခဲ့သည်။ ဘာလုပ်ရမည်ဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိသွားခဲ့သည်။
မြစ်ဝကျွှန်းပေါ်ဒေသရှိ မြို့ကလေးတမြို့မှ စက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသော မေမေနှင့် သင်္ဘော မာလိန်မှုး ဖေဖေ၊ ညီမလေး၊ မောင်လေးနှင့် ကျွန်မတို့မိသားစုသည် သာယာပျော်ရွှင်သော သာမန်မိသားစုလေးသာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်မ ဆယ်တန်း ဂုဏ်ထူးများနှင့် အောင်တော့ ဆရာဝန်မရှိသော မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမို့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ ဆေးအမှတ်မမှီသောအခါ စီးပွားရေးမေဂျာကို ကျွန်မ ရွှေးချယ်ခဲ့သည်။
မေမေ့ညီမ တီတီလေး၏ ပွဲရုံလုပ်ငန်းများကို ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ရင်း စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)တွင် ကျွန်မ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ခုနစ်တန်းကျောင်းသူ ညီမလေး၊ လေးတန်းကျောင်းသား မောင်လေး၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျွန်မ၏ ကျောင်းစရိတ်များနှင့် ကျွန်မတို့မိသားစု အတော် ခြိုးခြံချွှေတာခဲ့ရသည်။
ဖေဖေ့သင်္ဘော ရန်ကုန်ဆိုက်ကပ်တိုင်း ကျွန်မဆီ ဖေဖေ ရောက်လာပြီး မုန့် ဖိုးပေးလေ့ရှိသည်။ မေမေ့ စီးပွားရေးအကြောင်း၊ ညီမလေးနှင့် မောင်လေး စာကြိုးစားကာ လိမ္မာသည့်အကြောင်း၊ ရွာအကြောင်းများဖြင့် သားအဖတွေ စကားသံတွေ ဝေစီခဲ့သည်။ မသုံးဘဲစုထားသော မုန့် ဖိုးဖြင့် လက်ဆောင်ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်သောအချိန်များသည် ကျွန်မအတွက် တနှစ်လုံးပင်ပန်းသမျှ အတိုးချကာ နားရချိန်ဖြစ်သည်။ မေမေ ချက်ကျွှေးသော အရသာရှိသော ဟင်းလျာများကို စားသောက်ရင်း၊ ဖေဖေ ပြောပြသော သင်္ဘောမောင်း အတွေ့ အကြုံများအကြောင်း၊ မောင်လေး၊ ညီမလေး ပြောပြသော သူတို့ သူငယ်ချင်းများ အကြောင်းသည် ကျွန်မအတွက် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မတို့မြို့လေးတွင် ရန်ကုန်မှ အဝယ်ဒိုင်လာဖွင့်သော ကိုအောင်နှင့် ကျွန်မ ဆုံတွေ့ ခဲ့သည်။ ကျွန်မမှလွဲ၍ ဟိတ်ဟန်မရှိ ပွင့်လင်းရိုးသားကူညီသော ကိုအောင်နှင့် ကျွန်မတို့ မိသားစုမှာ ဆွေမျိုးပမာ ခင်မင်လှသည်။ မြို့မှာ ကျောင်းတက်နေသော ကျွန်မနှင့်တော့ ခုမှ သိကျွှမ်းခင်မင်ရသည်။ ကျွန်မထက် ၈နှစ်ကြီးသော ကိုအောင် ကျွန်မကို စိတ်ဝင်စားမှန်း မိန်းကလေးသဘာဝ ကျွန်မရိပ်မိသလို ငယ်ရာကကြီးလာသော ကျွန်မ မိဘများလည်း ရိပ်မိမှာဖြစ်သည်။
ကိုအောင် ရန်ကုန်ကို ရောက်လျှင်တော့ ကျွန်မဆီကို လာလည်တတ်သည်။ ကိုအောင့်မွေးနေ့ကြေးအိုးကျွှေးချင်သည်ဟု ခွင့်ပန်လာသောအခါ တီတီလေးက အသာတကြည် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးရင်း ဘုရားမတက်တာ အတော်ကြာပြီ ကိုယ်မြတ်နိုးရတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ရွှေတိဂုံဘုရားတက်ချင်တာ ဒါပထမဆုံးပဲလို့ကိုအောင် မေတ္တာဖွင့်ဟလာသာအခါ ကျွန်မ ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည်။
ရတဲ့ သင်္ဘောနဲ့ချက်ချင်း ပြန်လာခဲ့ဟုဆိုကာ မေမေဖုန်းဆက်လာတော့ ကျွန်မ သဘောပေါက်မိသည်။ သည်သတင်း မေမေ့ထံ ရောက်သွားပြီဟု။ မောင်အောင့်ကို မေမေ ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမက်တော့ မတော်နိုင်ဘူး စကားတခွန်း ယတိပြတ်ဆိုကာ ကျွန်မကို ရန်ကုန်ပြန်ခိုင်းခဲ့သည်။
မြို့ဆီ ပြန်မှာမို့ အန်တီ (ကျွန်မမေမေ)တို့ ဆီ လူကြုံများပါးချင်သလားဟုဆိုကာ ကိုအောင် ကျွန်မဆီလာလည်တော့ ခြံထဲတွင် ကျွန်မတို့စကားပြောဖြစ်သည်။ မျက်နှာမကောင်းတဲ့ ကျွန်မမျက်နှာကိုမြင်တော့ လူရည်လည်သော ကိုအောင် ရိပ်မိမှာမလွဲဖြစ်သည်။ ကိုအောင် ကျွန်မကို လာတွေ့ သည့်သတင်း တီတီလေးဆီမှ မေမေ့ထံ ရောက်ဟန်တူသည်။ မေမေ့ဆီက စာတစောင် ကျွန်မရရှိခဲ့သည်။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဆိုင်ကိစ္စ၊ ရပ်ရွာကိစ္စများနှင့် အလုပ်များသော မေမေ ဒီစာကို အချိန်ယူရေးရဟန်တူသည်။
ကျောင်းစာတွေ၊ ပွဲရုံအလုပ်တွေနဲ့သမီးပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ မေမေ သိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက် သမီး။
သီးချိန်တန်သီး၊ ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ကြတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ မေမေလည်း ငယ်ရာက ကြီးလာတာပဲ။ မောင်အောင်ဟာ စိတ်သဘောထားကောင်း၊ ကူညီတတ်တဲ့ လူငယ်တယောက်ပါ။ မောင်အောင့်ကို မေမေတင် မဟုတ်ပါဘူး ဒီမြို့ကလူတွေ အကုန်လုံး ချစ်ခင်ကြတယ်။ မောင်အောင်ဟာ အတန်းပညာမရှိပေမယ့် စီးပွားရှာတဲ့ပညာရှိတယ်။ သူတို့ မိသားစုဟာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ချမ်းသာလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှမရှိတဲ့ ဘဝကနေ စလာတာ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းတယ်။ မောင်အောင့် အကြောင်းကို သမီးထက် မေမေပိုသိတယ် သမီး။
ဒါဆို ဘာလို့သဘောမတူတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ မောင်အောင်နဲ့မေမေတို့မတူဘူး သမီး။ တချို့ ယောက်ျားလေးတွေက ချစ်ရုံသာချစ်ပြီး သားမှတ်မှတ်၊ မယားမှတ်မှတ် ပေါင်းချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတာ မဟုတ်ဘူး။ မိသားစု အသိုင်းအဝန်းနှစ်ခု ပေါင်းစည်းတာ။
မောင်အောင်သောက်တဲ့ သိန်းချီတန်တဲ့ အရက်ပုလင်းဆို လှလွန်းလို့မေမေဆို မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင်ဆိုပြီး ကြည့်ယူရတယ်။ မေမေတို့ အတွက် တသိန်းဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံဆိုတာ တလလုံး ပင်ပင်ပန်းပန်း နဖူးကချွှေး ခြေမကျအောင် လုပ်တာတောင် မရနိုင်ဘူး။ မေမေဆို သိန်းချီတန်တဲ့ အရက်သောက်မယ့်အစား လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှုလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့တွေးမိတယ်။ မောင်အောင်ကတော့ သူရှာတာ သူသုံးဖို့ လို့တွေးမှာပေါ့။
အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ညနေတိုင်း အရက်ဝိုင်း၊ ဖဲဝိုင်း၊ ကာရာအိုကေဝိုင်းရှိတယ်။ မောင်အောင် ချမ်းသာပေမဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရှိ သုံးဖြုန်းနေတာတော့ မေမေ မကြိုက်ဘူး။ မောင်အောင်နဲ့ဆိုရင် ငွေပုံပေါ်ထိုင်နေရပေမယ့် သမီး စိတ်ဆင်းရဲနေရလိမ့်မယ်။
မောင်အောင်မှာ ရည်စားရှိခဲ့ဖူးတယ် သမီး။ မေမေတို့ မြို့ကိုတောင် သူ့ မိဘတွေနဲ့ အတူ လာလည်ဖူးတယ်။ ကောင်မလေးက အစိုးရဝန်ထမ်းအရာရှိ၊ ခေတ်ပညာတတ်၊ ရည်ရည်မွန်မွန်လေးနဲ့ချောတယ်။ ကောင်မလေးက ဖုန်းတွေ ဆက်ပေမယ့်မောင်အောင်က အဆက်ပြတ်တယ်။ မေမေ မေးတော့ သူတို့ နဲ့ကျွန်တော် မတူဘူး အန်တီ။ သူက ချွှေတာခြိုးခြံရတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်း။ ကျွန်တော်က ငွေလိုရေလိုသုံး စီးပွားရှာရသူတွေ။ တစ်နေ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ လိမ့်မယ်တဲ့။ မောင်အောင် တော်တယ်သမီး။
အချစ် ဖြစ်လာတယ့်အချိန် ဦးနှောက်ထဲမှာ ဓာတ်တမျိုးထုတ်လုပ်တယ်
ဆိုတာ သမီး ဖတ်ဖူးမှာပေါ့။ အလွန်ဆုံး ၂လကနေ ၂နှစ်ထိခံတယ်။ အရွယ်ရောက်လာရင် အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲရှိလာတာပဲ။ မဖြစ်သင့်တဲ့ အချစ်ဆိုရင်တော့ အသိညဏ်နဲ့ချွှန်းအုပ်ရမယ် သမီး။ နှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာဖြစ်သွားပေမယ့် အချိန်တန်ရင် အနာကျက်သွားမှာပဲ။ ဘဝမှာ အချစ်ထက် အရေးကြီးတာတွေ ရှိသေးတယ်။
ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို စဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို မဆိုင်းမတွလုပ်မှ လူတော် သမီး။ မေမေ့သမီးက လိမ္မာရေးခြား၊ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့ မေမေအမြဲတမ်းအားကိုး ဂုဏ်ယူရတဲ့၊ မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေရဲ့လေးစားအတုယူရတဲ့ သမီးကြီးဆိုတာ မေမေ ယုံကြည်တယ်။
သမီးသွားမယ့်လမ်းကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မေမေ ယုံကြည်တယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သမီးဟာ မေမေ့သမီး ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂။
ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာနေချိန်ဆိုတော့ ကျောင်းတက်တုန်းကလို မပင်ပန်းပေမဲ့ စိတ်တော့ ပင်ပန်းသား။ ဘယ်ဆီရောက်လို့ဘယ်ဆီပေါက်မယ်မသိ။ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းတို့ လို ရင်ဖက်ခြင်းဖလှယ် ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင် သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ရှိခဲ့သလို Yanzi ၊ Chantrea ၊ Biao ဆိုတဲ့ ကြုံရင် တွဲတဲ့ ပန်ဒါ၃ကောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမဂျူးရဲ့ပင်လယ်နှင့်တူသော မိန်းမများကို အားကျလို့ စန်းထွန်းချစ်သော ပန်ဒါများ လို့ပို့ စ်နာမည်ပေးရင် ကောင်းမလား။ ဆရာမလွန်းထားထားရဲ့ ကျွှန်တော်နှင့် ပန်းသုံးပွင့်ကို အားကျလို့စန်းထွန်းနှင့် ပန်ဒါ၃ကောင်လို့နာမည်ပေးရင် ကောင်းမလား။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ရပ်ကွက်ထဲက အကြောင်းမို့ လို့ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာပေပဲပေါ့။
Yanzi ကတော့ သူ့ တရုတ်တွေနဲ့ ပဲ အဖွဲ့ ကျပေမဲ့ သူတတ်နိုင်သလောက်တော့ ဝေးဝေးကနေ ကူညီတတ်ပါတယ်။ နေ့ လည်စာ ထမင်းသွား မစားဘူးဆိုရင် ပန်းသီ၊ ကိတ်မုန့် ကို ထမင်းစားဆောင်ကနေ သယ်လာပေးတာမျိုး၊ အိမ်စာတွေမရရင် သူ ရှာတွေ့ တဲ့ အင်တာနက်က ကိုးကားကို ညွှန်းပေးတာမျိုး။
Yanzi က ကံလည်း တကယ်ကောင်းတယ်။ စာကိုလည်း သိပ်ကြိုးစားတာလည်း မဟုတ်ဘဲ အတန်းတိုင်း မှန်မှန်အောင်လေရဲ့ ။ ကားမောင်းလိုင်စင်လည်း တခါတည်းရ။ သောက်သောက်လဲကျတဲ့ ASD ဘာသာမှာလည်း သူ့ ထက်တော်တဲ့သူတွေက B- ၊ C+ ၊ NC ရတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ က ဘီရပြီး အောင်သွားလေရဲ့ ။ အလုပ်လည်း တခုပဲ လျှောက်တယ်။ အဲဒီတခုကပဲ ရတယ်။ အလုပ်မဝင်ခင်လည်း သူ့ အဘွားနေမကောင်းလို့တရုတ်ပြည် ပြန်ဖို့ခွင့်တပတ်တောင်းတာ ရုံးက ခွင့်၂ပတ်ပေးလို့အားလုံးက So Lucky လို့ဝိုင်းပြောရတဲ့အဖြစ်။ အလုပ်ခွင်ထဲဝင်ရင် ၆ လလောက်က ခွင့်လုံးဝ မရှိ။ Lucky is my symbol ဆိုပြီး သူ့ ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေကို လက်ဝါးခြင်းရိုက်ပြီး စန်းထွန်းဆီ ထည့်ပေးသွားလေရဲ့ ။
Yanzi နဲ့အတန်းကွဲသွားရင် Chantrea ၊ Biao တို့ နဲ့ဆုံပြန်တယ်။ နောက်ကြုံမှ ဒီကျောင်းရဲ့သင်ကြားနည်း စနစ်လေး တင်ပါဦးမယ်။ အစားကြိုက်တာ တူတဲ့ စန်းထွန်းတို့ တွေ စနေနေ့ တဝက် အတန်းပြီးချိန်ဆို တရုတ်ဘူဖေးဆီ ချီတက်လေ့ ရှိပါတယ်။ Pao Le ( ဗိုက်ဝပြီ) ဆိုပြီး ထပ်စားနေတတ်တဲ့ Yanzi ကို Chantrea က Now I know what is your strong point. Even though you said you are full, but you still keep on eating. Now you become my Panda sister လို့ဆိုရင် Yanzi ကလည်း I am not Panda. လို့ပြန်ပက်လေ့ရှိပါတယ်။
Pizza Ranch လို ကြက်ကြော် Fast Food ကြိုက်တဲ့ Yanzi ဟိုသူငယ်ချင်းနဲ့ထွက်စားလိုက်၊ ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ထွက်စားလိုက်နဲ့ပေါင်ချိန်တိုးလာပါတယ်။ တရုတ်ကျောင်းသားတွေကလည်း များတာကိုး။ I am not Panda လို့ဆိုသော်ငြားလည်း ဖြူဖြူဝဝ ချစ်စရာ ပန်ဒါမလေးပါ။
Biao ကတော့ ဝဝတုတ်တုတ် ဖိုးဝရုပ် မန်နေဂျာပုံ ပေါက်ပါတယ်။ Chantrea နဲ့Biao ဟာ နှစ်စကနေ နှစ်ဆုံးတဲ့အထိ တခါမှ မခွဲစဖူး။ အရမ်းတွက်ချက်လွန်းတဲ့ Biao ပန်ဒါ Verzion မှာ ဖုန်းသွားဝယ်တာ တပတ်လောက် မေးမြန်းလို့ မဆုံး။ မန်နေဂျာကို ကွန်ပလိမ်းလိုက်သေးတယ် အရောင်းစာရေးလေးက ဘာမှ မသိတဲ့အကြောင်း။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး တရုတ်ပြည်မှာဆို ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူးဆိုပဲ။ စလုံးတွေထက် ဆိုးနေသေးတယ်။ I came here to destroy USA လို့ကြုံးဝါးလိုက်သေးတယ်။
နည်းပညာအသစ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တတ်မြောက်လွယ်ပါတယ်။ Software Engineering Project တုန်းက စန်းထွန်းက Presentation တခုလုပ်၊ Tesfa က တခုလုပ်။ သူ့ ဟာသုံးသင့်တယ်၊ ငါဟာ့သုံးသင့်တယ်လို့ငြင်းကြ။ နောက်ဆုံးမှတော့ Biao က သူ့ လုပ်ထားတဲ့ Presentation ကို သူ့ ဘာသာ တင်သွင်း၊ သူ့ ဘာသာ အတည်ပြုသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ လုပ်တာကိုမှ မယုံဘဲ သူ့ လုပ်တာမှ အမှန်ဆိုတဲ့ မန်နေဂျာညဉ်ဆိုးလေး ရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ မြေယာဈေးကြီးတဲ့အတွက် မြေကွက်ကလေးနဲ့ တော့ နေချင်ပါသတဲ့။
သူ့ အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက်ကတော့ တကယ်ဆိုးပါတယ်။ ကျောင်းကို အင်တာဗျူးလာတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်း သူ့ Resume မှာ အမှားတွေ အများကြီးလို့ပြောရတဲ့အဖြစ်။ တခါကလည်း အာဂျီရို ဆိုလို့ကိုယ်တွေမှာ စဉ်းစားလိုက်ရတာ။ အသံထွက်ပြီး ပေါင်းခိုင်းတဲ့အထိ ဘယ်သူမှ နားမလည်။ နောက် ရှင်းပြလို့ရေးတေးတေး သဘောပေါက်သလို ရှိမှ Agile (အယ်ဂျိုင်း) Software Development Life Cycle ကို ပြောနေတာကိုး။ အဲဒီကတည်းက သူ့ ကို စချင်ရင် စန်းထွန်းရယ်၊ Yanzi ရယ်၊ Chantrea ရယ် ၃ယောက်ပေါင်းကာ အာဂျီရိုလို့ဝိုင်းအော်ကြတော့ပါပဲ။ သူ ကတော့ မချိပြုံးကြီး မိန့် မိန့် ကြီးပြုံးလို့ ။
တွေ့ ရင် သတ်ကြတဲ့ Yanzi နဲ့ Biao အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် ကုမ္ပဏီတခုတည်းက Offer ရကြသလို အလုပ်ကလည်း Biao က Application Engineer ၊ Yanzi က Associate Application Engineer အထက်အောက်။ အင်း အလုပ်ထဲမှာလည်း သတ်နေကြမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်။ တရုတ်ကျာင်းသားတွေဆို သူတို့ အမျိုးသမီးကို ခေါ်ရင် ဗီဇာလွယ်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံသားခံယူလိုက်ရင် တရုတ်ပြည် ပြန်ဝင်ဖို့ခက်လို့ တဲ့။ ကျောင်းပြီးရင် တရုတ်ပြည်ပြန်မဲ့သူတွေကြီးပဲ။
Chantrea ကတော့ အမြဲ တဟဲဟဲ ရယ်နေတတ်တဲ့ ကမ္ဘောဒီယားလေးပါ။ Biao အနိုင်ကျင့်သမျှခံပြီး စိတ်သဘောကောင်း ကူညီတတ်သူပါ။ စာမေးပွဲကျပေမဲ့ အလုပ်အရင်ရသွားလို့Texas ကို တန်းသွားရသူပါ။ Samnang Cheng ဆိုရင်လည်း တဟားဟားနဲ့ရယ်ရစေသူပါ။ မချက်မပြုတ်တတ်ပေမဲ့ ဒီကျောင်းမှာ အခန်းတွင်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ချက်ပြုတ်တတ်သွားတယ်။ တရုတ်ဘူဖေးဆိုင်တွေရဲ့Big Customer တွေပါ။
မြန်မာနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီယားမိန်းကလေးတွေ ထမီဝတ်တာ၊ ငါးပိ စားတာ။ အမေစုကို သိတယ်တဲ့။ သူတို့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကို အမေစုနဲ့နှိုင်းတတ်လို့ တဲ့။ ခမာနီမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ အစိုးရခြစားမှုတွေ ရုန်းကန်းနေရဆဲပါ။အစိုးရအရာရှိ အလုပ်တွေက အဆက်အသွယ်ကောင်းမှ ရတာပါတဲ့။
နိုင်ငံမတိုးတက်တော့ နိုင်ငံခြားကို ထွက်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေက စတိတ်ဗီဇာ ၁နှစ်ရချိန်မှာ ကမ္ဘောဒီးယားတွေက ၃လသာရသာ ကြည့်တော့။ စလုံးတွေဆို ကောင်းပါ့။ စတိတ်ကို ဗီဇာမလိုဘဲ ၆လ လာလည်လို့ ရတယ်။ အဲ အိန္ဒိယသွားရင်တော့ စလုံးတွေ ဗီဇာလိုပါသတဲ့။ စလုံးအစိုးရနဲ့ အိန္ဒိယ အစိုးရ သိပ်ကြည်ပုံ မရဘူး။ Chantrea သူ့ အမျိုးသမီးကို စတိတ်ကို အလည်ခေါ်ဖို့ တောင် ဗီဇာခက်ပါသတဲ့။ စတိတ်ကို အလည်သွားဖို့ တောင် ဗီဇာကို Greend Card ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ဟန်ဆောင်လက်ထပ်၊ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ပေးရပါသတဲ့။
ငြိမ့်ညောင်းသာယာသော Apsara အက၊ နာရီပေါင်းများစွာ မလှုပ်ဘဲ အရုပ်လေးလို ရပ်နေနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရပါတယ်တဲ့။
မြန်မာမှာတော့ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပေမဲ့ ခမာတွေကတော့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်က သက်သက်၊ ရေကစားပွဲတော်က သက်သက်။ ထင်ရှားတဲ့ အန်ကောဝတ် ၊ မျက်မှာလေးဖက်ရှိတဲ့ Bayon Temple၊ ပြင်သစ်ဆီက လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အထိမ်းအမှတ် မုခ်ဦးရှိပါတယ်။ နီပေါ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားတို့ လို တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိက ဝင်ငွေက ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေဆီက ရတာပါ။ ခမာစာ၊ စကားက ယိုးဒယားနဲ့ဆင်တူပါတယ်။
နာမည်ကြီး Angkor Wat Temple
ခမာသူလေး Phirada ဆီက လက်ဆောင်
၁၉၅၃ မှာ ပြင်သစ်ဆီက လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိမ်းအမှတ် Independence Monument ကမ္ဘောဒီးယားမြို့တော် Phnom Penh မှာ ရှိပါတယ်။
ယိုးဒယားစာနဲ့တူတယ်နော်။
လိုင်စင်ရှိရင် ပိုက်ဆံအများကြီး ပေးရတော့ လိုင်စင်မရှိဘဲ မောင်းကြပါသတဲ့။ တိုက်မိလည်း ရဲကို ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရုံပါပဲတဲ့။ ဒီတော့လည်း ဒီတိုင်းကြဲကြလေသတည်း။ Chantrea ဆို လိုင်စင်မရှိဘဲ ကားမောင်းပါတယ်တဲ့။ လိုင်စင်လိုချင်ရင် ဝယ်လို့ ရပါသတဲ့။
ဘလော့ဂါ ဝါခေါင်မိုးဆီ သွားလည်ရင်တော့ ခမာပြည်အကြောင်း စုံလင်စွာ သိရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနဲ့ဘယ်လောက်တူလဲဆိုတာ။
ဆိုက်တူဂိုက်တူတဲ့ ပန်ဒါ၃ကောင်ကို တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိရင် သတိရနေဦးမှာပါ။
ရှေ့ တန်း Yanzi Luo ၊ Chantrea Wattanakla ၊ San Htun နောက်တန်း Biao Lee
မိုင်းကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ရတဲ့ ဆူနမ်ရယ်၊ မိုင်းဆီလာပြီး အလုပ်ရှာနေတဲ့ စန်းထွန်းရယ် သုံးယောက်ပေါင်းပြီး ဘယ်လောက်တောင် လောင်းကျော်နေကြမလဲလို့တွေးတာကြည့်ပေတော့။ အချက်အပြုတ်မကျွှမ်းတဲ့ သုံးကောင်သား တယောက်အစားအစာ တယောက်မစားနိုင်။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုတောင် ဗီယက်နမ်စတိုင်၊ နီပေါစတိုင်၊ မြန်မာစတိုင် ကိုယ့်စတိုင်နဲ့ ကိုယ် ပြုတ်ကြတာပါ။ ဘော့စတွန်မှာ တယောက်တည်းကျန်နေခဲ့တဲ့ ရာမားက တို့ ၃ကောင်ကို မနာလိုတိုရှည် ဖြစ်လို့ နေလေရဲ့ ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ အပိုင်း ၁ ကနေ ၉ အထိ စဉ်ဆက်မပြတ် အားပေးဖတ်ရှုလာခဲ့တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ကျေးဇူးစကားဆိုရင်း ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၂။
နှစ်ခြုက်မိတဲ့ သီချင်းလေးတွေ အတူတူနားထောင်ရအောင်လို့ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်တဲ့သူတယောက် ညွှန်းသွားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
ပျော်ရွှင်သောနေ့ ကလေး ဖြစ်ပါစေ။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂။
"သူများသားသမီးတွေ သတင်းစာ ဖတ်တတ်နေပြီ။ မေ့သမီး ခုထိ မဖတ်တတ်သေးဘူး" လို့မကြီးက မေ့ကို တိုင်ရင် စန်းထွန်းတယောက်ကတော့ တုပ်တုပ်မှမလှုပ်။ ကျူရှင်က ပြန်လာတာနဲ့လွယ်အိတ်ကလေး ဘုတ်ကနဲပစ်ချ။ မောင်နှမနှစ်ယောက် ဆော့ဖို့ ပြေးတော့တာပဲ။
ရွာအလှပျက်တယ် ဖျက်လို့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်က ညွှန်ကြားသွားတော့ ဆောက်လက်စ ပျဉ်းကတိုးနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးခမျာ အပေါ်ထပ်ကြမ်းခင်းလေးတောင် မခင်းလိုက်ရရှာ။ ဟိုင်းကြီးရွာသစ်ဆိုတဲ့ လယ်ကွင်းထဲမှာ ရွာတည်တဲ့နေရာကို ပြောင်းရပါတယ်။ အဲဒီမှာ လေးတန်းတက်တော့ ၇ယောက်တည်းသာရှိသော အတန်းမှာ ပထမရတယ်။ အနူတောမှာ လူချောစန်းထွန်းကွ။
ပထမဆုဆိုတဲ့ အရသာကို သိသွားလို့ ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ စံပြကျောင်းတွေမှာ ၇တန်းအထိ ဆုတွေရနေခဲ့ဖူးတယ်။ ပုသိမ်ထ၂လည်းရောက်တော့ ကိုယ့်ထက်တော်သူတွေ အများကြီးမို့ပထမဆုမပြောနဲ့ အဆင့်၂၀ အတွင်း ဝင်အောင်တောင် မနည်း။
မေ၊ မောင်မောင်နဲ့ပုသိမ်ကအပြန် ဟိုင်းကြီးသင်္ဘောမရှိလို့ပြင်ခရိုင်ဖက်ကနေ လှည့်ပြန်မယ်ဆိုပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာ နေရာခင်း၊ ပစ္စည်းတွေချ။ သင်္ဘောထွက်ခါနီး စန်းထွန်းပေါက်စလေး သိရှိသွားတာက ပြင်ခရိုင်ကို သွားမဲ့သင်္ဘောမဟုတ်ဘဲ လပွတ္တာကို သွားမဲ့သင်္ဘော။ သင်္ဘောတွေကလည်း ပုံစံရော၊ ဆေးရောင်ပါ အတူတူကိုး။ မေကြီးရေ သဘောင်္က လပွတ္တာကို သွားမဲ့သင်္ဘော၊ ဘဘောင်္ခွာနေပြီ၊ မြန်မြန်ပြောင်းရအောင် ဆိုပြီး အထုပ်တွေယူ ဟိုဖက်သင်္ဘောကို ခုန်ကူး။ မေ၊ မောင်မောင် လာမြန်မြန်ဆိုတဲ့ အချိန် သင်္ဘောက ခွာနေပြီ။
သင်္ဘောတစီးလုံးလည်း ကျွှတ်ကျွှတ်ညံ၊ စန်းထွန်းပေါက်စလေးက ကျွှတ်ကျွှတ်ညံအောင် အော်ငို။ ပုသိမ်ကနေ ငပုတောရောက်တဲ့အထိ ၂နာရီလုံးလုံး ငိုလိုက်၊ မောလာရင် အိပ်ပျော်သွားလိုက်၊ နိုးလာရင် ပြန်ငိုလိုက်နဲ့ ။ တော်တော် ဝမ်းနည်းပက်လက်ငိုခဲ့တာတော့ ခုထိမှတ်မိသေးတယ်။
ငပုတောကို သင်္ဘောကပ်တဲ့အချိန် အရင်ရောက်နှင့်နေတဲ့ မေ၊ မောင်မောင်နဲ့စန်းထွန်းတို့ပြန်ဆုံစည်းခန်းကတော့ ဘဘောင်္၂စီးလုံးက စိတ်ဝင်တစားရှိကြတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ မေဆို စန်းထွန်းရေထဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ထင်တာတဲ့။ ပြင်ခရိုင်ရောက်တဲ့အထိ စန်းထွန်းကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံဘဲ မေ မျက်ရည်တွေ ကျနေခဲ့တာကိုတော့ သေသေချာချာ မှတ်မိနေသေးတယ်။
လေးတန်းနှစ်မှာ ရွာသစ်က တာဘောင်တွေမှာ ဖေ့စက်ဘီးအကြီးကြီးနဲ့စက်ဘီးစီး သင်ပါတယ်။ စန်းထွန်း စွတ်နင်းသမျှ ဖေ နောက်ကနေ အသားကုန်ပြေးလိုက်၊ မြောင်းထဲကျသွားမှာစိုးလို့လိုက်ထိန်း၊ ပါးစပ်ကနေလည်း မနားတမ်းသင်။ ခုပြန်တွေးကြည့်တော့ ဖေ တော်တော်ပင်ပန်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ ဂိုက်ကို ထိန်းနိုင်ပေမဲ့ စက်ဘီးက လူထက် ကြီးနေတော့ စက်ဘီးမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဖေက ပထမဆုရလို့ဘာလိုချင်လဲတဲ့။ လက်စွပ်ရယ်၊ စက်ဘီးရယ်လို့ ။ ဖေ ပုသိမ်ကနေ ပြန်လာတော့ အိမ်ရှေ့ မှာ သမီးစက်ဘီးလေးထောင်ထားတယ် ဆိုလို့ပြေးကြည့်တယ်။ ဆိတ်ငါးကောင် မိန်းမစီး အနီရောင်ဘီးလေးမြင်တော့ ဝမ်းသာလို့ထခုန်တာ ကြမ်းပြင်ကျိုးသွားတယ်။ အဲဒီနေ့ တင်ပဲ စက်ဘီးစီးတတ်သွားတယ်။ ဖေ ကတိတည်ပါတယ်။ လက်စွပ်လည်း ပေးတယ်။
တမှတ်သည် တဘဝ။ ဘဝကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အောင်စာရင်းထွက်တာမို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နေ့ ပါပဲ။ စာမေးပွဲဖြေပြီးကတည်း ဂုဏ်ထူး၂လုံးလို့ပြောထားတာ မှန်မလား။ မှားမလား။ မနက်စောစော ၅နာရီလောက်ကတည်းက အောင်စာရင်းသွားကြည်ဖို့မေနဲ့မခင်ခင်လှိုင်က တက်ကြွနေကြတယ်။ တိုးမပေါက်တဲ့ လူအုပ်ကြားထဲ ခုံနံပါတ်ပြောပြီး သိရတာ ဂုဏ်ထူး၃ခု။ ထွက်မယ်မထင်တဲ့ မြန်မာစာ၊ သချာင်္၊ သိပ္ပံ။ ထင်တဲ့အတိုင်း ဝိဇ္ဖာတွဲက မထွက်ဘူး။
အိမ်ပြန်ရောက်လို့တော်တော်ကြာမှ သူများပြောတာ မယုံဘူး၊ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ချင်တယ်ဆိုပြီး မေနဲ့ထပ်ချီတက်ပြန်တယ်။
အဲဒီနှစ်က ဆေးမှတ်ကလည်းတော်တော်မြှင့်သွား၊ အင်ဂျင်နီယာကလည်း GTC ကနေ ကူးရမှာ၊ ဆေးဘက်ပညာသည်လည်း မတက်ချင်၊ စံပြအင်ဂျင်နီယာဆိုတာကြီးကိုလည်း မန္တလေးဖက်မှာ သွားမတက်ချင်၊ အီကိုက ကွန်ပျူတာထက်အမှတ်နည်းတော့ အဲဒီနှစ်က ဆေးပြုတ်တော်တော်များများ ကွန်ပျူတာရောက်တယ်။
တနိုင်ငံလုံး မေးခွန်းတခု စနစ်ကနေ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် တခုစီ မေးခွန်းတခုစီ စနစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီနှစ်က ပုသိမ်မေးခွန်းက ရန်ကုန်ထက်လွယ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ၉တန်းအေခန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ဆေးရောက်ကုန်တာက သက်သေထူပါတယ်။ စန်းထွန်း နင်သာ ဆယ်တန်းကို ပုသိမ်မှာတက်ခဲ့ရင် ဆေးရောက်ချင်ရောက်မှာတဲ့။ နို့ မို့စန်းထွန်းတယောက် နားကြပ်ကြီးတကားကားနဲ့မြင်ယောင်သေး။ ခုတော့ ကွန်ပျူတာကြီး တကားကားနဲ့ ။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမဆုံးနေ့ 
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ရွှေပြည်သာ) ဆိုတာသာ သိတယ်။ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မှန်းမသိ။ ညီအမနှစ်ယောက် မေးမြန်းပြီး မြို့ထဲကနေ တညင်းကုန်းအထိ ကားစီး၊ တညင်းကုန်းကနေ ကျောင်းဂိတ်အထိ ကားတဆင့်ပြောင်းစီး၊ ဂိတ်ကနေ ကျောင်းဝင်းနားအထိ ဗိုက်ပူချက်ပလက်ကားကြီး စောင့်စီး။
သစ်ပင်ဆိုလို့သဘောင်္ပင်၊ ဆန်ပုပ်နံ့ တွေနဲ့မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ရွှေအိုးအရက်ချက်စက်ရုံ၊ ဖူဂျီဆပ်ပြာစက်ရုံကြားက စက်ရုံကြီးကို ကျောင်းယောင်ဆောင်ထားတာ တွေ့ လိုက်ရတဲ့သကာလ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆိုတာကြီးကို စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေးခမျာ စိတ်ကူးနဲ့ကွာဟလေတော့ ကျောင်းသွားဖို့ ကို တီကောင်ဆားပက်သလို။ ဒုတိယနှစ်ကျတော့ RollCall က ပထမနှစ်ကလို မချောင်တော့လို့ကျောင်းတက်ရာကနေ ကျောင်းပျော်ကြီး ဖြစ်သွားပြန်ရော။
ဘွဲ့ ယူတဲ့နေ့ 
ပညာအမွေပဲ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မိဘတွေ ပျော်တပြုံးပြုံးဖြစ်ချိန်မှာ စန်းထွန်းကတော့ ဘွဲ့ ယူဖို့ပြင်ဆင်ရတာ ပင်ပန်းလွန်းလို့နောက်များဆို အဝေးရောက်ဘွဲ့ ယူချင်မိသွားတယ်။
ရန်ကုန်မှာလည်း ကော့နေအောင် ခံရသလို ဟိုင်းကြီးကျွှန်းက မိဘနှစ်ပါးအတွက်လည်း အသက်ရှင်သလား မသိရလို့အထိတ်တလန့် လန့် ။ စိတ်ကြိုက်မုန့် ထုပ်၊ ကျားပျံကိတ်မုန့် လေး ကျွှေးတော့ ရေစိုတဲ့ဆန်နဲ့ချက်ထားတဲ့ ထမင်းဝါဝါကြီးရယ်၊ ငါးပိဖုတ်လေးနဲ့စားနေရတာ သုံးရက် ရှိပြီ။ မုန့် လေးက စားလို့ ကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီး တလုတ်စာပေးပဲဖြစ်ဖြစ် စားစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ တပည့်တွေကို မျှဝေနေတဲ့ ဖေ့ကို တွေ့ တော့ ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာ။ အသက်ရှိနေသေးရင် ပစ္စည်းဥစ္စာက ဘယ်အချိန်ချိန်ပြန်ရှာရှာ ရှာလို့ ရတယ်လို့သဘောပေါက်သွားချိန်၊ ကမ္ဘာပျက်သွားချိန်၊ ရက်စက်ယုတ်မာမှု၊ လူသားဆန်စွာ အသက်ရှင်သန်လိုမှုတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့။
စင်္ကာပူကို လာတဲ့နေ့ 
လေယာဉ်ဆိုတာ ပထမဆုံးစီးဖူးတဲ့နေ့ ။ မေကတော့ ပြောပါတယ် စန်းထွန်းမွေးပြီး ၆လသမီးမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်လာတော့ လေယာဉ်စီးဖူးတယ်ဆိုပဲ။ ပိစိကွေးဆိုတော့ ဘယ်မှတ်မိမှာတုန်း။ မကြီးကြိုက်တဲ့ သရက်သီးတွေ HandCarry အပြည့်သယ်ခဲ့တာတော့ မှတ်မှတ်ရရ။
စင်္ကာပူမှာဘွဲ့ ယူတဲ့နေ့ 
မြန်မာပြည်မှာတုန်းကလို မဟုတ်ဘဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘွဲ့ ယူတဲ့ နေ့ လေးပါပဲ။ ကျောင်းသားတွေအားလုံး ဘွဲ့ ဦးထုပ်ကို မြှောက်ပြီးဖမ်း၊ လက်ဝှေ့ ရမ်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတာ ပျော်ဖို့ အကောင်းသား။ မိသားစုစုံစုံညီညီရှိတာကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူကနေ ဟောင်ကောင်ရောက်တဲ့အထိ ၃နာရီလုံး ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ကနေ ချီကာဂိုလေယာဉ်ပြောင်းတော့ နှံပြည်စုတ်သာသာ လေယာဉ်တွေစီးဖူးတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် ဘိုးအင်းနှစ်ထပ်လေယာဉ်အကြီးကြီးးးးးးကို တွေ့ တော့ ငိုတာတွေရပ်လို့စူးစမ်းပါတော့တယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့အပေါ်ထပ်ကို မှားတက်သယောင်နဲ့စပ်စုလိုက်သေးတယ်။ ခုံတိုင်း ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ကျယ်ပါ့ ။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ဖြတ်နေတယ်လို့ဖန်သားပြင်မှာ တွေ့ တော့ ဒီအချိန် လေယာဉ်ပျက်ကျရင် ငါတော့ ဂန့် ပြီလို့တွေးကြောက်လိုက်သေးတယ်။ မီးသီးခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တော့ မီးလင်းလာတယ်။ နားကြပ်လေးက နားထောင်ဖို့ ။ ဟုတ်ပြီ လူပုံလေးက ဘာပါလိမ့်။ နှိပ်တယ် ဘာမှမထူးခြားဘူး။ ထပ်နှိပ်တယ်။ နောက်တော့မှ လေယာဉ်မယ်လေးက ဘာအလိုရှိပါသလဲရှင်တဲ့။
ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် မှုတွေနဲ့ အတူ စူးစမ်းချင်မှုတွေနဲ့ရင်မောနေရလို့အမှတ်တရနေ့ စွဲလေးပါပဲ။ ကျောင်းရောက်လို့ခုတင်ပေါ် ပစ်လှဲမှပဲ စိတ်ဒုံးဒုံးချနိုင်တော့တယ်။
အခက်အခဲတွေ၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်တာတွေ၊ ခံပြင်းမှုတွေနဲ့ အတူ ဆူနမ်တို့ တွေက ၄ ကြိမ်မြောက်မှာ ရပေမဲ့ သူများထက် ပိုခက်ခဲလေ့ရှိတဲ့ စန်းထွန်းထုံးစံအတိုင်း ၆ကြိမ်မြောက်မှာတော့ ရရှိသွားပါတယ်။ ဒါတောင် တခြားပြည်နယ်တွေမှာ လိုင်စင်လျှောက်ဖို့အရမ်းခက်လို့ ၊ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားနေလို့ ၊ သနားငဲ့ညှာသောအားဖြင့် မပေးချင်ပေးချင်နဲ့ကျောင်းကမထွက်ခွာခင် ၂ရက်အလိုမှာမှ ရလိုက်တာပါ။
ချောကလက်တထုပ်ဝယ်ပြီး တွေ့ သမျှသူငယ်ချင်းတွေကို ပေးကာ ဒီနေ့ကားမောင်းလိုင်စင်ရလို့ကွန်ကရက်လုပ်နေတာဆိုပြီး ပါးစပ်နားရွှက်ချိတ်လုမတတ် ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့စန်းထွန်းတယောက် တရွက်ကွက်လုံးကြားအောင် မောင်းထုနေခဲ့ပါတယ်။
နေသားတကျရှိနေတဲ့နေရာကနေ ထွက်ခွာသွားရမယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းမူတွေနဲ့ အတူ ဆူနမ်၊ မိုင်းတို့ ကို တွေ့ ရမှာမို့ပျော်ရွှင်မှုတွေရယ် လွန်ဆွဲနေတဲ့ အမှတ်တရနေ့ စွဲလေးပါပဲ။
ကဲ သမံစီးရေ ရေးပြီးပြီနော်။ တို့ မောင်လေးကို အပိုင်မစီးနဲ့ တော့။
အကယ်၍များ စာလာဖတ်နေသူသည် ဝါသနာအရ ဘလော့တွင် စာရေးသားနေသူဖြစ်ပါက စာဖတ်သူအား တဂ်လိုက်ပါသည်။
(ကျောင်းမှ ထွက်ခွာသောနေ့အမှတ်တရ ဒီပို့ စ်လေးကို ရေးသားပါသည်)
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂။
သူမ အိပ်ယာမှ နိုးထလာခဲ့ချိန် အခန်းထဲမှာ လရောင်ဖြာလဲ့နေခဲ့သည်။ ညဉ့်နက်အောင် ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကို သင်အံနေချိန်တုန်းက သူမ လမင်းကြီးကို မေ့လျော့နေခဲ့သည်။ သူမ သတိထားမိလောက်အောင် လရောင်က ရွှန်းမြလွန်းလှသည်။ လရောင်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုကြောင့် သူမ ပြတင်းပေါက်နားရပ်ကာ ဝင်းဝင်းပပသာနေသည့် လမင်းကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း တစုံတယောက်သောသူကို သတိရမိသည်။ ဒီအချိန်ဆို မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ သူ့ ဆီမှာ မနက်ပေါ့။ မြူခိုးဝေ့တဲ့ ဆောင်းမနက်မှာ သူအရင်လို စက်ဘီးစီးနေမလား။
စိန်ကြယ်သေးညွှန်း၊ မိုးလုံးလွန့် သော်
ခင်ပြန့် ပန်းလွှာ၊ ဝရန်ကာ၏
ကြာသည်ကိုမေ့၊ မချမ်းမြေ့ ဘူး။
ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့ သူမနဲ့သရုပ်ပြဆရာဖြစ်တဲ့ သူ စာသင်ခန်းမှာပဲ ရိုးရိုးလေးတွေ့ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဌာနမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်သလို ပြေပြစ်တဲ့ ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ သူဟာ ကျောင်းသူတွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားလှပါတယ်။ စာသင်ကောင်းသလို ကျောင်းသားတွေကို ဂရုတစိုက် ရှိတယ်လို့သတင်းမွှေးပါတယ်။ Undergraduate တွေကို သင်နေရာက Post Graduate သင်ဖို့သူမတို့ အတန်းကို ရောက်လာပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ပထမဆုံးသင်တဲ့ အတန်းဖြစ်လို့အတော်လေး အားထုတ်ပါတယ်။
သူမကတော့ သူနဲ့ တကယ့်ကို တခြားစီ။ ရုပ်ရည်က သာမန်၊ ဆံပင်က စုတ်ဖွားဖွား၊ ပုလင်းဖင် မှန်ကြောင်လေးပါ။ သူမဆီမှာ သူမအကြိုက်ဆုံးဆိုလို့သူမမေမေ ပေးထားတဲ့ မေမိုးမာန်ဆိုတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ နာမည်လေးက လွဲရင်။ နာမည်စီးတာလားမသိ။ သူမကတော့ နာမည်နဲ ခြားနားစွာ မထက်မြက်။ သူစာသင်ချိန်မှာ မျက်မှန်ကွယ်ပြီး ခိုးငိုက်ရင် သူကလည်း ပါးနပ်စွာ စာမေးပါတော့တယ်။ အိပ်ချင်စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်မသိ အသည်းအသန် စဉ်းစားကာ ပေါက်ကရတွေ ဖြေရင် ပြုံးတုံ့ တုံ့ နဲ့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုတတ်ပါတယ်။
မေက သူငယ်ချင်းတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ဗရုတ်ကျတတ်သူ၊ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့အပြိုင် ငြင်းခုန်တတ်သူ၊ စနောက်အော်ဟစ်နေတဲ့သူ။ ဗရုတ်ကျနေတဲ့ မေတို့ အုပ်စုကို သူ တခါတလေ နှုတ်ဆက်တတ်တယ်။ မေ့ကို မဟုတ်ဘူး။ မေ့သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတွေကို။ သူလည်း မေတို့ လို ဗရုတ်ကျချင်တယ် ထင်ပါရဲ့ ။ ဆရာမို့ လို့ရုပ်တည်ကြီးကို ဟန်လုပ်ပြီး နေရရှာတာ။ အသက်ကလည်း မေတို့ ထက် ကြီးလှ နှစ်နှစ်ပေါ့။
မျက်ခုံးနက်နက်၊ မျက်လုံးနက်နက်လေးတွေနဲ့ ဆံပင်တွေက ရွှေညိုရောင်။ သူဆီမှာ မေအကြိုက်ဆုံးက ဖြောင့်စင်းပြီး ပေါ်လွင်လှတဲ့ နှာတံလေး။ အဖျားလေးမှာ ကော့ပြီး အနားသတ်ထားတယ်။ နဖူးပေါ်ဝဲနေတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေ သပ်တင်လိုက်ရင် ပေါ်လာတဲ့ ဇင်ယော်တောင်ပံမျက်ခုံးလေးတွေကို မြင်ရတိုင်း မေသာဆို ဒီလို မျက်ခုံးလှလှလေးတွေကို ဖုံးမထားဘူး။ ဖေါ်ထားမှာလို့မချင့်မရဲ တွေးမိတယ်။
ကျောင်းတက်ခါနီးမှ အိပ်ယာက ထ၊ အသည်းအသန်ကျောင်းကိုပြေးတဲ့ မေတယောက် စောစောနိုးလာတဲ့တနေ့လမ်းလျှောက်နေတုန်း စက်ဘီးစီးလာတဲ့ သူနဲ့ဆုံပါတယ်။ ရုံးဝတ်စုံမဟုတ်ဘဲ ဆွယ်တာရိုးရိုးလေးနဲ့သူ လူငယ်လေးတယောက်လို နုနယ်ပျိုမြစ်နေပါတယ်။
"ဟိုင်း ပရော်ဖက်ဆာ ဂွတ်မောနင်း"
သင်တန်းပြီးသွားလို့မေနဲ့ သူ မဆုံတော့ပါဘူး။ တခါတလေ ကျောင်းသားတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့ သူ့ ကို မေတို့အတန်းဆင်းချိန် ဖျတ်ခနဲ တွေ့ လိုက်ရတာကလွဲရင်။ သင်တန်းပြီးတိုင်း ကျေးဇူးတင်အီးမေးလ်တွေကို သင်ကြားတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာတွေကို ပို့ တတ်တာ မေ့အကျင့်။
သူ့ အပြုံးက နှလုံးစွဲစိမ့်
သူ့ ကိုသာမှတ် ပြုံးရုံတတ်သည်...
မေ ကျောင်းပြီးခါနီး Management Course ယူတော့ သူနဲ့ ပြန်ဆုံတယ်။ သူ မေ့ကို မှတ်မိတယ်။
"မေ ဟုတ်တယ်မလား" တဲ့။
နွေရာသီတုန်းက နစ်ကတိုင်ဆန်းဆန်းလေးတွေ ဆင်ယင်တတ်သူ ဆောင်းရာသီမှာတော့ ဆွယ်တာလှလှလေးတွေနဲ့ရှင်းသန့် နေပါတယ်။ မေကတော့ အမြဲ ပိုသီပတ်သီ၊ ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း၊ မေ့တတ်လျော့တတ်တာလည်း မေ့အပြင် နှစ်ယောက်မရှိ။ ပြသနာတပုံးတခေါင်းနဲ့ရှိနေတတ်သူ။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့မှုန်မှိုင်းနေတဲ့သူ။ သူကတော့ မေနဲ့ခြားနားစွာ အမြဲတိကျသေစွာ၊ စေ့စပ်၊ ထက်မြက်ပြီး ရှင်းသန့် နေတတ်သူ။ မေ သူ့ ကို နှစ်သက်သဘောကျတာတော့ အမှန်ပါ။
မနက်တိုင်း သူ့ ကို မြင်ရတာနဲ့မေရဲ့တနေ့ တာ ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ သူ ရဲ့ချိုသာတဲ့ အသံလေးကို ကြားရတာက မေ့အတွက်တာ့ ကဗျာတပုဒ် နားထောင်ရသလိုပါပဲ။ တရက်မှာတော့ စာသင်နေတာ သူမဟုတ်လို့သိရတာက သူ့ ဖေဖေ အသည်းအသန်ဖြစ်လို့သူအမြန်ဆုံး လိုက်သွားရတယ်။ နှုတ်မဆက်ဘဲ ထွက်သွားတဲ့ သူ့ ကို မေ သတိရမိပါတယ်။
ပွေ့ ချောထွေးလည်း၊ ဝမ်းနည်းရုံမျှ
ခဏတွေ့ မော၊ ရင်ခုန်ရောယှက်
အချစ်ဆိုတာလည်း အံ့သြဖို့ ကောင်းသား။ ဘာကြောင့် ချစ်တယ်လို့ အကြောင်းအရာ မယ်မယ်ရရ ပြောစရာမရှိ။ သူ့ ခွင့်ပြုချက် မလိုဘဲ တိုးတိတ်စွာ ချစ်လို့ ရတယ်။ သူ့ ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ တိတ်တိတ်လေး လွမ်းနေလို့ ရတယ်။ မေနှစ်ခြိုက်မိတဲ့ စာသားလေးက "မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးသည် လုံခြူံမှု၊ ကိုယ်နှုတ်စောင့်စည်းမှုနှင့် လိမ္မာပါးနပ်မှုအပေါ် မူတည်၍ အချစ်ကတော့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ကြည်နူးမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပေါ် တည်သည်"တဲ့။
ရေအောက်ထက်နိမ့်လို့ရေကာတာတွေကာထားပြီး အမြဲထကြွဝီရိယရှိတဲ့၊ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးတွေ၊ ဗိသုကာမြောက်ခန့် ညားလှတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးတွေ၊ လေရဟတ်ကြီးတွေကို ရှိတဲ့ သူမွေးဖွားရာ နိုင်ငံကို မေ အလည်တခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်မိသည်။ ပေးဆပ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်း မရှိသောကြောင့် မေ့အချစ်သည် မနက်ရှိုင်းဟု ဆိုချင်ဆိုကြမည်။ မေ ဝန်ခံပါသည်။ တချိန်ချိန်ကျလျှင် မေ သူ့ ကို မေ့သွားကောင်းမေ့သွားနိုင်သည်။
နောက်ထပ် ဆုံဆည်းဖို့ ဆိုသည်မှာ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ၊ ကံတရားပေါ်တွင် မူတည်၍ ဆုံဆည်းခွင့်ကိုတော့ မေ မမျှော်လင့်တော့ပါ။ တကျွှန်းခြင်း၊ တမြေစီခြားနေသူခြင်း လမင်းကို မော့ ကြည့်မိရင်း မျက်နှာခြင်း ဆုံနိုင်ပါသည်။ နွေဦးသည် ဥသြနဲ့ပန်းပွင့်များကို တပါတည်း သယ်ဆောင်လာဘိသကဲ့သို့အချစ်ဆိုသော အရာသည် အလွမ်းများကို တပါတည်း ဆောင်ကြဉ်းလာပါသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ တထောင့်တနေရာမှာ ရှိနေသော နေသန်ဆိုသော လူတယောက်ကို မေ လွမ်းနေမိသည်။ တမ်းတမိသည်။ သတိရမိသည်။ သူနဲ့မေ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ တမိုးအောက်မှာ ရှိတယ်ဆိုသော အသိကြောင့်ပင် မေ ကျေနပ်မိသည်။
လမင်းမှာ ဆုံစို့ ကွယ်။
(ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ပန်းကြာဝတ်မှုန် ဝထ္ထုဖတ်ရင်း နှစ်ခြိုက်မိတဲ့ ဆရာမကြည်အေး ကဗျာများကို သုံးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး ရေးဖွဲ့ တဲ့ အက်ဆေးမို့ လို့အမှားပါရင် ဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါဦး။ ဆရာမ ဂျူး၊ ဆရာမ ခင်ခင်ထူး နှစ်သက်သူမို့သူတို့ ရဲ့ရေးဟန်တွေ လွှမ်းမိုးနေတာကတော့ အသေအချာပါ။)
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၂။